မတျ 2021 – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
ကျန်းမာကြည့်ကောင်းအောင် ဘယ်လို နေထိုင်သင့်သလဲ
———၊ လရိပ်မေ ၊——— ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကျေနပ်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်း၊ ဉာဏ်ပညာအစရှိတဲ့ အရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်တာက ကျန်းမာရေး၊ အောင်မြင်မှု၊ အလုပ်တွင်ကျယ်မှု စတာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာကြည့်ကောင်းတဲ့ ဘ၀ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် လူတိုင်းလိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။...
အမျိုးသားတို့ ခံတွင်းကျန်းမာပြီး သွားဖြူစင်စေမည့် နည်းလမ်း ၁၀
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အမျိုးသားတွေဟာ သွားနဲ့ခံတွင်း ကျန်းမာရေးကို အလေးမထားတဲ့အတွက် သွားပိုးစားတာ၊ သွားဖုံးနာတာ အစရှိတဲ့ သွားနဲ့ခံတွင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားတွေ ခံတွင်းကျန်းမာပြီး သွားဖြူစင်စေမယ့် နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သွားဖြူစေမည့်...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်တာတွေက အရင်နဲ့စာရင် ပိုများလာပါသလား ဆရာမ။ A. အခုခေတ်မှာ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်တာ (Allergy)တွေက တော်တော်များလာပါတယ်။ ကလေးလေးတွေမှာဆိုရင် ကြက်ဥနဲ့မတည့်တဲ့ Allergy၊ အခွံမာအစေ့အဆန် (Nuts)တွေနဲ့ မတည့်တဲ့...
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အထိုင်များတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်တွေက နှလုံးရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ထိပ်တန်းအန္တရာယ်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ (၁) BMI ကို ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ ထိန်းထားပါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံနဲ့ အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံစာတို့...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အာဟာရဓာတ် အလုံအလောက်မရတဲ့အခါ အာဟာရချို့တဲ့မှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အာဟာရဓာတ်တွေထဲမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ပရိုတင်း၊ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်၊ အဆီဓာတ် စတာတွေ ပါဝင်ပြီး ဒီဓာတ်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ကို စွမ်းအင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားတာ၊...
သွေးတိုးလွန်းတဲ့အခါ လေဖြတ်နိုင်သလား . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. သွေးအရမ်းတိုးလာတဲ့အခါမှာ လေဖြတ်တာတွေ၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ TT(FB) A. ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မနက်ကအကောင်းကြီး ညနေကျမှ မူးတယ်..မူးတယ်ဆိုပြီး လေဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာ...
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အသက်ကြီးလာပေမယ့် အိုမင်းမှုဖြစ်စဉ်နှေးအောင် ကာကွယ်နေထိုင်လို့ရပါတယ်။ အရေးကြောင်းထင်တာနဲ့ အရေပြားတွဲကျတာတို့လို အိုမင်းမှုတွေမဖြစ်ဖို့ နေ့စဉ်နေထိုင်တဲ့ ဘ၀မှာ လိုက်နာသင့်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်နည်းတွေ ရှိပါတယ်။ (၁) တစ်နေ့တာ အစားအသောက်ထဲ ဘယ်ရီသီးထည့်စားပါ ဓာတ်တိုးမှုကြောင့် အသားအရေအိုမင်းတာနဲ့ အရေပြားမှာ...
အရိုးပါးရောဂါအန္တရာယ် လျော့ကျအောင် အသက်ငယ်စဉ် လိုက်နာသင့်သောအချက်များ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— အသက်ကြီးချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အရိုးပါးရောဂါမဖြစ်စေဖို့ အသက်ငယ်စဉ်ကတည်းက ကာကွယ်ပေးရပါမယ်။ အသက် ၁၂-၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ အရိုးထုထည်အမြင့်ဆုံး (Maximum Accumulation of Bone Mass) ရအောင် ကယ်လ်စီယမ်ကို စုဆောင်းထားရင် အသက် ၂၀-၂၅...
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ဆံကေသာထိခိုက်နေသူတို့ စားသင့်သည့်အစာအာဟာရ
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အာဟာရချို့ တဲ့တာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲတာ၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုမကောင်းတာ၊ သိုင်းရွိုက်ပြဿနာဖြစ်တာနဲ့ ဆံပင်ကို ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ ထိတွေ့လွန်းတာတို့ကြောင့် ဆံပင်သားအားနည်းခြောက်သွေ့ကာ ဆံပင်ကျွတ်နှုန်းများနေပါသလား။ ဆံပင်သားကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ချောမွေ့စေဖို့အတွက် သင်နေ့စဉ်စားနေတဲ့ အစားအသောက်ထဲ အောက်ပါအစာတွေ ထည့်စားသင့်ပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်ငါး...